Faah Faahino kasoo baxaysa Dilal kala duwan oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Faah Faahino kasoo baxaysa Dilal kala duwan oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho!!
Faah Faahino kasoo baxaysa Dilal kala duwan oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho!!
Waxaa shalay magaalada Muqdisho siyaabo kala duwan loogu dilay labo askari oo la sheegay in ay katirsanaayeen Ciidanka Dowlada Soomaaliya, waxaana dilkan ka dambeeyay kooxo hubeesan oon wali heebtooda la garan.
Dilka hore ayaa ka dhacay Gudaha Suuqa Bakaaraha gaar ahaan goob boosteejo ah oo gaadiidka laga raro, waxaana la sheegay in dilkaasi ay fuliyen rag bistoolado ku hubeesnaa kuwaa oo dilka kadib goobta ka baxsaday
Ciidamada amaanka gaar ahaan kuwa Nabad Sugida Qaranka ayaa dilka kadib gaaray halka lagu dilay asariga, waxaana la sheegay in howlgal halkaasi ka sameeyeen ciidanka dowlada ay kusoo qabteen dad ay tuhmayaan.
Dhinaca kale Kooxo hubeesan oo gaari watay ayaa askari kale oo katirsanaa Ciidanka Dowlada waxa ay ku dileen Xaafada Xamar Jadiid ee degmada Wardhiigley, kooxdan ayaana la sheegay in ay rasaas ku fureen sadex askari oo wada joogay iyagoona goobtaasi si deg deg ah uga baxsaday.
Amaanka magaalada Muqdisho ayaa ahaa maalmihii lasoo dhaafay mid yara degnaa oo ay ka yaraadeen dilalka qorsheesan iyo qaraxyada inta badan ka dhici jiray, waxaana qeybo kamid ah Caasimada si weyn amaankeeda u adkeeyay ciidanka booliiska iyo kuwa Nabad Sugida.
Previous PostDAAWO MUUQAAL: Gaashaanbuurta NATO iyo Dowlada Ruushka oo Xiisad wayn ka dhex taagan!! Next PostDonald Trump oo sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan u musaafurin doono Dad tiradooda ay gaareyso illaa 3 milyan oo qaxooti ah!!